STRAINERS & FILTERS Factory, mpamatsy - China STRAINERS & FILTERS Manufacturer
Famaritana NPT na BSPT fipoahana fipoahana eo amin'ny fonony. Ny outlet Blowoff dia vita amin'ny plugs. Ny efijery dia voaravaka vy 304 tsy misy fangarony miaraka amina kofehy vita amin'ny lasitra. Ny seza mihitsoka ao amin'ny vatana dia manome toky ny fampifanarahana ny efijery. Ny refin'ny Gove dia mifanaraka amin'ny fenitra Metric na AWWA C606. Pressure miasa sy mari-pana 16 bar / 250 psi nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifamatotra na epoxy ranoka nolokoina anatiny sy ivelany. ...
7701 Tapitra mifarana Y-type Strainer
Detail NPT na BSPT fipoahana fipoahana eo amin'ny fonony. Ny outlet Blowoff dia vita amin'ny plugs. Ny efijery dia voaravaka vy 304 tsy misy fangarony miaraka amina kofehy vita amin'ny lasitra. Ny seza mihitsoka ao amin'ny vatana dia manome toky ny fampifanarahana ny efijery. Tapitra ny kofehy NPT na Metric. Fitaovana miasa sy mari-pana 25 bar / 300 psi naoty -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifamatotra na epoxy ranoka nolokoina anatiny sy ivelany. Famaritana ara-pitaovana Body ca ...
Detail BSPT fipoahana fipoahana amin'ny fonony. Ny outlet Blowoff dia vita amin'ny plugs. Ny efijery dia voaravaka vy 304 tsy misy fangarony miaraka amina kofehy vita amin'ny lasitra. Ny seza mihitsoka ao amin'ny vatana dia manome toky ny fampifanarahana ny efijery. Ny flanged sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN1092-2 PN16 / 25. Dimension mifanatrika mifanaraka amin'ny andian-dahatsoratra F1 DIN3202. Ny tsindry miasa sy ny mari-pana 16 dia naorina -10 ° C hatramin'ny 120 ° C ho an'ny DN50 ka hatramin'ny DN600. 25 bar naoty -10 ° C hatramin'ny 120 ° C ho an'ny DN50 ka hatramin'ny DN300. Corrosi ...
Famaritana NPT na BSPT fipoahana fipoahana eo amin'ny fonony. Ny outlet Blowoff dia vita amin'ny plugs. Ny efijery dia voaravaka fantsona vy 304 tsy misy fangarony. Ny seza mihitsoka ao amin'ny vatana dia manome toky ny fampifanarahana ny efijery. Ny flanged sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN1092-2 PN16 / 25; ANSI B 16.1 Kilasy125. Nankatoavina WRAS: vatana FIG.7101 DN50-DN600 DI, gasket EPDM ho an'ny rano azo sotroina. Pressure sy mari-pana miasa FIG.7101: 16 bar / 200 psi naoty -10 ° C hatramin'ny 120 ° C ho an'ny DN50 ka hatramin'ny DN600. ...
GLSY-16 karazana tehina fampitahana tsorakazo
Detail Product fampidirana Ny fananganana sivana GLSY- karazan-tsokajy 16 manasokajy sivana dia mitovy amin'ny sivana karazana GL (y), manampy fotsiny ny fampifangaroana mitambatra, ny teoria amin'ny fandotoana dia tsy mitovy amin'ny sivana karazana GL (y), mora kokoa fametrahana takelaka ivelany DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L 300 350 400 450 500 550 650 775 900 H 130 165 195 230 300 335 420 500 580
Sivana karazana GL (Y) -16
Ny fampidirana ny vokatra GL (Y) karazana sivana ampiasaina amin'ny rano, solika, fantsom-panafody sy karazana fitaovana, manilika indrindra ireo masoandro ao anaty fantsona hiarovana ny valizy fanampiana, valizy famotsorana tsindry, rano, valizy ary paompy sns. efijery mahazatra ho an'ny fampiasana rano adop1010 ~ 30 lavaka / c m2, efijery ho an'ny fampiasana entona mandray 40-100 lavaka / c m2, efijery ho an'ny fampiasana menaka mampiasa lavaka 60- -200 / cm2. Parameter teknika 1. Tsindry miasa: 1 .6MPa 2.Teat preci ...
Fitsipika momba ny asa Ny masinina sasany dia hoentina ao anaty fantsona rehefa mametraka, misy masoandro koa ao anaty akora mandritra ny famokarana, rehefa mikoriana ny sivana amin'ny alàlan'ny sivana, ny fahalotoana rehetra dia hivadika efijery fotsiny ny fonony misokatra ary ny efijery manadio dia tsara. Fanamarihana: ny velaran'ny efijery an'ny sivana karazana T no kely indrindra amin'ireo sivana, ary io no sivana faran'ny sarotra indrindra. Parameter teknika 1. Tsindry miasa: 1.6 ~ 4.0MPa 2. Medium: rano, entona voajanahary 3. Sh ...